Luis Nani Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Ay Sir Alex Ferguson Iyo Jose Mourinho Ay Ku Yidhaahdeen Markii Uu Casaanka Qaatay Kulankii Real Madrid - Gool24.Net
Luis Nani Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Ay Sir Alex Ferguson Iyo Jose Mourinho Ay Ku Yidhaahdeen Markii Uu Casaanka Qaatay Kulankii Real Madrid
Sir Alex Feguson waxa uu rajaynayay inuu koobka Champions League ku guuleysto xili ciyaareedkiisii ugu dambeeyey ee Manchester United, laakiin casaan uu qaatay Luis Nani ayaa rajadaas baaba’ ka dhigtay kulankii ka dhacay Old Trafford ee ay ku martigeliyeen Real Madrid.
Ciyaartan oo ka tirsnayd wareegga 16-ka ee Champions League, waxa Manchester United ay haysatay fursad ay ugu soo bixi karaysay wareegga siddeedda waxaanay la hor martay gool uu Nani ku qasbay Sergio Ramos inuu gool iska dhaliyo qaybtii labaad oo ay ciyaarta ku hoggaamiso 2-1 lugtii dambe, laakiin laacibka reer Portugal ayaa kaadh cas loo taagay siddeed daqiiqadood oo kaliya kaddib markii ay goolka u dabbaal-dageen.
Real Madrid oo ka faa’iidaysanaysa ciyaartoyga ay dheer tahay 10-ka laacib ee Manchester United ayaa waxa gool u dhaliyey Luka Modric oo beddel kusoo galay, waxaana mid kale usii raaciyey Cristiano Ronaldo, sidaas ayaanay Los Blancos barkimada ku dheeraysatay halka ay Manchester United niyad-jab kaga baxday garoonka.
Ciyaarta kaddib waxa Nani oo niyad-jabsan la hadlay Sir Alex Ferguson iyo Jose Mourinho, waxaana isaga oo arrintaas ka sheekaynaya uu yidhi: “Hubaashii, Ferguson wuu ogaa in xili-ciyaareedkaasi ahaa kiisii ugu dambeeyey, sababtoo ah dhawr sannadood oo ka horreeyey ayay soo baxayeen warar la isla dhex-maray oo sheegayay inuu noqonayo sannadkiisii ugu dambeeyey, laakiin uu shaqada sii watay.
“Sannadkaasi wuxuu ahaa mid wanaagsan oo aanu fiicanayn Champions League iyo Premier League, waxaanu ogaa in haddii aanu garaaci lahayn Real Madrid kulankaas, in aanu mar kale noqon doono horyaalka Yurub. Waxay ahayd fursad weyn.
“Qof walba wuu ogaa taas, sababtoo ah waanu xoogganaayn laakiin markii aniga la isaaray ayay jid heleen. Si fiican ayaan u ciyaarayay, isbeddel ayaanan samaynayay kulankaas, waan xasuustaa.
“May jirin sabab la igu saaro. Xataa Mourinho iyo Ferguson ayaa ii yimid oo igu yidhi: ‘Dhibaato ma leh, adigu qalad maad lahayn.”
Nani waxa uu ciyaartoyga Manchester United ka raalligeliyey kaadhka uu qaatay inkasta oo tababareyaashu u sheegeen in aanu wax qalad ah samaynin ee uu garsooruhu ku gefay waxaanu yidhi: “Waan raalligeliyey kooxda xataa aniga oo ogaa in aanan qalad samaynin, may ahayn badheedh. Waxaan eegayay kubadda oo aan doonayay inaan sidii Zinedine Zidane u dejisto laakiin waxay heleen wax ay Real Madrid ku caawiyaan.”